Hiran State - News: Ururka Shabaab oo laga yaabo iney ka tanaasulaan dagaalada mogdisho kedib.
Ururka Shabaab oo laga yaabo iney ka tanaasulaan dagaalada mogdisho kedib.
Mogdisho: (Hiranstate.com)- Ururka Shabaab oo dagaalo ba'an kula jira shacabka Somaliyeed kuwooda ku sugan koofurta Somaliya ayaa dagal afka u badan bilaabay iyagoo wado kasta u maraya sidii loogu furi lahaa wadooyinka ka baxa amaba soo gala suuqa weyn ee Bakaaro oo ay maalin kasta u soo mari jireen gubka ka yimaada dhinaca dowlada.
Wararka maanta ayaa sheegaya in dhaqaalo la doonayey in la siiyo hogaamiye Indhacade si wadooyinkaasi midood loo furo lagu guul dareystay kedib markii ay wadooyinka dhaqdhaqaaqooda ay dusha sare ka ilaalinayeen ciidamda Amisom iyo kuwa dowlada ka tirsan.
Ururka Shabaab iyo ajaanibta ka dagaalanta dalka Somaliya 35% hubka ay dowlada federalka kula dagaali jirtay waxey ahaayeen kuwo ay ciidamda dowlada ka iibsan jireen sidaasi daraadeed hada arinta waxey u muuqataa mid la xakameeyey inkastoo ay walito dadaal dheer wadaan si ay arintaasi ugu suuro gasho. waxey u badan tahay in hadii maalamaha inagu soo aadan lagu guuldareysto in wadooyinkaasi dib loo furo iney kooxdaani ku adkaan doonto sidii ay magaalada Mogdisho uga sii dagaalami lahaayeen.
Qaar ka mid ah maleeshiyada Shabaab ayaa durbaba dagaalada Mogdisho ka niyad jabsan kedib markey waayeen risaastii ugu imaan jirtay dhinaca dowlada oo ay u arkaan halkii ay sida weyn ugu tiirsanaan jirtay kooxdaasi. Yusuf Indhacade ayaa isagu xooga saarayo sidii uu ugu yaraan hal wado ugu furi lahaa kooxdaani ka hor inta aysan qabsan ciidamda dowlada xaafadaha Hurwaa iyo Yaaqshiid si qorshahaasi u hirgalane waxaa howsha dhinaca Shabaab lagu wareejiyey hogaamiyahii hore ee Xizbul Islaamkii bur buray halka dhinaca dowlada uu abaabulkaasi wado Indhacade oo isagu dhinaca dowlada ka tirsan sida lagu helayo warbixino laga helayo shirkadaha isgaarsiinta xarumahooda oo si weyn ula socda dhaqdhaqaaqa labada dhinac ay wadaan.
Dowalda federalka ayaa iyagu hadii ay gacanta ku hdigto magaalda Mogdisho oo kaliya soo jiidan karta indhaha beesha caalamka waxaase ka horeeya arintaasi in bal marka hore masuuliyiinta dowlada yahiin kuwo iska war haya laakinse hadii qaarkood kooxahaan la shqeynayan waxey meesha dhamaantooda ka tagi doonaan iyagoo dhaleeceysan.
Laakinse Shabaab ayaa kucataabaya wadooyinka maa la furo maxey u xiran yahiin iyagii ayaa ugu dheereeyo ganacsatadii suuqa bakaaro ka ganacsan jiray in wadooyinkaas xiran la furo, taasina waxey ku tuseysaa sida ay wadooyinkaas muhiim ugu yahiin kooxahaan dagaalka ba'an kula jira shacabka Somaliyeed. waxaa kale oo ay Shabaab dhibaato ka heystaa ma helaan macluumaad u sahlayoiney ogaadaan xiliga lagu soo qaadayo dagaalka halka ay markii hore rag ku xiran dhinaca dowlada u sii sheegi jireen in lagu soo duulayo saacad hebel kediba ay aaga dhan baneyn jireen laakinse hada waa wal wal ku nool oo xili kasta waxey moodaan in lagu sooduulayomaadama aysan dhaqdhaqaaqa iyo dagaalada dowlada iyo Amisom wax badna kala socon.
· admin on March 23 2011 14:20:31 · 0 Comments · 1880 Reads ·
14,588,955 unique visits